सुनको मूल्य तोलामा १७ सय रुपैयाँले घट्यो ,कतीमा भइरहेकाे छ काराेबार ? — Imandarmedia.com
१राष्ट्रपतिले दिएको तक्मामा किन छैन चुच्चे नक्सा ? यस्तो छ खास रहस्य
२केही दिनमै नयाँ सरकार गठन हुन लागेको बारे प्रचण्डले गए यस्तो खुलासा, बालुवाटारमा खैलबैला
३मेयर कप क्रिकेटको उपाधि एपीएफलाई
४नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै, २४ घण्टामा कति थपिए ?
५प्रधानमन्त्रीलाई २० हजार जरिवाना, यस्तो छ कारण
६माधव नेपालले यसरी गरे देशभरका आफ्नै नेता कार्यकर्ताको घोर अपमान
७भारतमा एकैदिन भेटिए झण्डै डेढ लाख भन्दा बढी नयाँ संक्रमित
८रूपन्देहीलाई हराउँदै पञ्जाव पुलिस विराट गोल्डकपको क्वाटरफाइनलमा
९सकियो तीन दलको बैठक
१०बुढानीलकण्ठमा शुरु भयो तीन दलको बैठक
११२८८ जना कोरोना संक्रमित थपिए
१२जब बूढानीलकण्ठ हिँडेका जसपाका नेताहरु बीच बाटोमै बैठक बसे
सुनको मूल्य तोलामा १७ सय रुपैयाँले घट्यो ,कतीमा भइरहेकाे छ काराेबार ?
काठमाडौं । सुनको भाउ तोलामा एक हजार ७ सय रुपैयाँले घटेको छ । सोमबार ८८ हजार ७ सय रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भएको छापावल सुनको भाउ मंगलबारकालागि ८७ हजार रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
सुनको भाउ घटबढमा अन्तरािष्ट्रय बजार मूल्य नै प्रमुख कारण भएको महासंघले जनाएको छ । यस्तै आजका लागि तेजावी सुनको भाउ ८६ हजार ५५० रुपैयाँ कायम भएको छ । सोमबार तेजावी सुनको कारोबार ८८ हजार २५० रुपैयाँमा भएको थियो ।
सुनसंगै चाँदीको भाउ पनि ओरालो लागेको छ । सोमबार प्रतितोला १३४० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको भाउ आजका लागि ४० रुपैयाँले घटेर १२९० रुपैयाँमा झरेको छ ।
योसँगै नेप्से २ हजार ५ सय १५ दशमलव ३ अंकमा बन्द भएको छ । सोमबार उपसमूहका शेयरमा पनि हरियो बलेको छ । सोमबार शेयर बजारमा ५ अर्ब ६९ करोड २३ लाख भन्दा धेरै रकमको कारोबार भएको छ । आज शेयर बजारमा २ सय ९ वटा कम्पनीको १ करोड १८ लाख ३८ हजार ४ सय ८८ कित्ता सेयर खरिद विक्री भएको थियो ।
आज चन्द्रागिरि हिल्सको शेयर सबैभन्दा धेरै ९.९ प्रतिशतले बढेको छ । आज सिटिजन्स म्युचुअल फण्डका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन् । यस्तै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक शेयर कारोबार सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ । सो कम्पनीको ४४ करोड रुपैयाँको कारोबार हुँदा शेयर मूल्य ५२९ रुपैयाँ बढेको छ ।
विजनेस सँग सम्बन्धित
सेयर बजारमा बिहीबार नेप्से परिसूचकमा सामान्य वृद्धि
आज पनि बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
आज नेपाली बजारमा बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
फेरि बढ्यो पेट्रोलको मूल्य, अब लिटरलाई कति ?
घट्यो सुनको मूल्य कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
नेप्से अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा
सुनको मूल्य बढ्यो,आज कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
तोलामा ९ सय रुपैयाँले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस्ताेछ हेर्नुहाेस